Faahfaahin ka soo baxaysa duqeymo cirka ah oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa duqeymo cirka ah oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose
Posted by editor on November 14, 2011 Comments
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya duqemo xaga cirka ah oo laga geyetey deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo ay ka mid tahay degmada Afgooye oo 30 Km ka xigta dhanka Koonreed magaalada Muqdisho ee caasimada ah.
Xiriiro kala duwan oo SBC la sameysay dad kala duwan oo ku sugan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa naloo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 gantaal ay ku dhaceen habeenimadii xaley degmada Afgooye iyo deegaanka Laanta Buuro halkaasi oo ay ku leeyihiin xarumo xarakada Al-Shabaab.
Goob jooge magaciisa ku koobay Cabdikariin sababo dhanka amaanka kuna sugan degmada Afgooye ayaa sheegay in ay arkeen iftiin weyn oo sida hilaacii ah isla markaana ay maqleen qarax aad u weyn, wuxuuna sheegay in ay dareemeen cabsi aad weyn.
“Qaraxu wuxuu ka dhacay agagaaraha xerada Tadaamun oo ah goob lagu xanaaneeyo agoonta, dhanka galbeedka ayuuna ka yimid gantaalku” ayuu sii raaciyey Cabdikariin oo uu intaasi ku darey in qaraxu uu ahaa gantaal.
Dhinaca kale goobta qaraxu ka dhacay ee ku dhaw xareda agoonta Tadamun ayaa la sheegay in uu ahaa guri ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan xarakada Shabaabka, kuwaasi oo aan la ogeyn in ay wax ku noqdeen qaraxaasi iyo in kale.
Sidoo kale duqeyn kale oo laga fuliyey deegaanka Laanta Buuro oo ku dhaw Afgooye & garoonka diyaaradaha No 50 ayaan la ogeyn khasaaraha ay dhalisay.
Goob jooge lagu magacaabo Idiris Macalin ayaa sheegay in laba ganataal ay ku kala dhaceen Laanta Buuro & xerada Ambasaro oo ku dhaw garoonka diyaaradaha No 50, halkaasi oo ay ku leeyihiin xarakada Shabaabku saldhig ayna u taal jidgooyo.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay malqeen qaraxyo ayna xigeen holac iyo uuro balse waxay xuseen inaanay war u heyn khasaaraha ay sababeen weeraradaasi gantaal.
Lama oga weeraradan cida fulisey mana jirto cid sheegatey, waxaase ay ku soo aadayaan xili Kenya ay horey u shaacisey inay bartilmaameed ka dhigan doonto toban magaalo oo ay ka mid tahay degmada Afgooye oo ay ka taliyaan xoogaga Shabaabka.
Sidoo kale waxay ku soo aadayaan weeraradan xili hawlgalo dhanka cirka ah oo ay fulinayaan diyaaradaha duuliye la’aanka ee drone –ka loo yaqaan uu Mareykanku u adeegsanayo gantaalo uu ku bartilmaameysanayo saraakiisha sar sar ee xoogaga Shabaabka iyo dagaalyahanada Ajanabiga ah ee ka barbar dagaalamaya.